/Blog/garari/Mashandiro anoita Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) kune anovaka muviri
Posted on 11 / 18 / 2019 by Dr. Patrick Young akanyora garari.
1. Chii chinonzi Pyridoxal Hydrochloride?
Pyridoxal Hydrochloride kana vitamini B6 iri vhoriyamu ine mumvura inowanzowanikwa muzvikafu. Iyo inonyanya kushandiswa sechinhu chinowedzera chekudya.
Kana ichishandiswa sechinhu chinowedzera, Pyridoxal Hydrochloride inogona kurapa kana kudzivirira matambudziko mazhinji ekurapa. Inowanzotorwa jekiseni, mumuromo kana mune zvekuwedzera zvekudya.
Kana iwe uri kuvaka muviri, iyi vhitamini yakakunakira iwe nekuti ine zvinoverengeka zvinobatsira mabasa mumuviri. Semuenzaniso, inobatsira muviri wako kugadzira lipids, makabhohaidhiidhi, uye amino acids izvo zvese zvakakosha kuitira kushanda kwakakwana kwemuviri.
Zvinowanika pyridoxine hydrochloride vhitamini B6 mune zvekudya zvinosanganisira zviyo, huku / turkey, miriwo uye michero.
2. Nei Vavaki vemuviri Vanoda Mavitamini - pyridoxine Hydrochloride?
Nei mavitamini akakosha zvakanyanya kuvaki vemuviri? Kuti iwe ugone kupedzisa mabasa ese aunawo pazuva, iwe unofanirwa kudyisa muviri wako pane zvakasiyana zvakakosha zvinovaka muviri. Kuve usina kukwana mune chero cheizvi zvinovaka kunokonzeresa kuparara kwenzira yako metabolic. Izvi zvinotungamira kune yakaderera mashoma uye kusashanda kuita.
Semuvaki wemuviri, iwe uchada michero yakawanda kupfuura iwo anotungamira hupenyu hwekugara. B-6 pyridoxine hydrochloride yakakosha zvakanyanya kwauri nekuti chinhu chinodiwa muswe phosphorylase, chiitiko chakabatana ne glycogen metabolism. Muchidimbu, iwe unoda vitamini B6 yehutano hwakanaka metabolism. Vitamin B6 inokwidziridza mabasa ema enzyme ayo anotora chikamu mukuparara kweprotein.
Pyridoxine hydrochloride mhedzisiro mumuviri ine zvakawanda zvekuita nebasa rayo mumapuroteni metabolism. Ndokusaka kana uchishandisa iyo, zvinokurudzirwa kuti utore chikafu cheprotein usati warohwa nejimu. Iwe zvakare unogona kutora chikafu chine mapuroteni panguva yekuita kwako basa usati wapihwa, iwe uchirovedza, mushure mekudzidziswa uye usati warara pamubhedha.
Nekudaro, izvi hazvireve kuti unofuratira zvimwe zvekudya. Muviri wako unoda yakawanda yemamwe mamineral akakosha kuti ushande zvakanaka uye kuti udzivirire kubva kuzvirwere.
3. Ndeipi mhedzisiro yePyridoxine Hydrochloride sevhitamini pane kusimba?
Icho chikonzero nei iwe uchifanira kutora huwandu hwakaringana hweB6 ndeyekuti inobatsira yakawanda kune akawanda maitiro emakemikari anosanganisira amino acids nemapuroteni.
Semuvaki wemuviri, unoida zvakanyanya pakuumbwa kwako-tsvuku. Iwe unofanirwa kuwedzera masero ako matsvuku-kudzora mvura kubuda uye kuona kuti muviri wako unowana okisijeni yakakwana.
Chimwe chikonzero nei iwe uchida B6 ndechekuti inovandudza mwero wako wekurwisa kusagadzikana. B6 inogadzira simbi mukudya kwako kuti iwedzere kuwanikwa. Tsandanyama dzako dzinoda iron yakawanda uye yakawanda hemoglobin (oksijeni) kuti utsungirire kushushikana.
Iwe zvakare unoda simba rakawanda panguva yekushanda-kubuda. Pyridoxine hydrochloride inobatsira muviri wako nekuwedzera chiyero chekupiswa kwemakabohydrate mumasero ako. Izvi zvinoita kuti uwane simba rakakwana.
Munguva yekudzidziswa, pachave nekunetseka mune yako mumuviri simba rekugadzira maitiro. Kunozove nekushandurwa mushutu yemuviri kunokonzerwa nemabasa akaoma. Uyezve, iwe ucharasikirwa nehuwandu hwakakura hwezvinhu zvinovaka mumarara, urini, uye ziya nekuda kwekuwedzera metabolism.
Nezvikonzero izvi, iwe uchafanirwa kudzoreredza izvo zvinovaka muviri wako. Iwe unogona kuita izvi nekutora ma supplements kuti uchengetedze uye gadzirisa yako minwe muswe. Izvi zvichave nechokwadi kuti matishu ako anoramba akasimba uye akasimba. Iko hakuna chinowedzera chiri nani kupfuura pyridoxine hydrochloride vhitamini B6 paunoda kuvaka patsva yemuviri wako.
4. Nhoroondo yePyridoxal Hydrochloride
Pyridoxal Hydrochloride (65-22-5) yakatanga kugadzirwa mu1939 asi yakawanikwa mu1934. Kuwanikwa kwakaitwa naPaul Gyorgy, chiremba weHungary. Akaitumidza kuti vhitamini B6 uye akaishandisa kurapa dermatitis acrodynia, mamiriro eganda mumakonzo.
Makore mashanu mushure mekuwanikwa kwake, imwezve sainzi, Samuel Lepkovsky akakwanisa kuitsauranisa kubva kumupunga bran kuwana pyridoxine hydrochloride poda.
Mu1939, Folkers naHarris vakasarudza chimiro che pyridoxine. Makore matanhatu gare gare, Snell airatidza kuti B6 yakanga ine mafomu maviri: pyridoxamine uye pyridoxal. Zita rekuti Pyridoxal Hydrochloride rakauya nekuti Vitamin B6 yaive yakarongedzwa kumusha kuti pyridine.
Nhasi, iyo World Health Organisation inosanganisiraPyridoxal Hydrochloride mune yavo Rondedzero Inokosha Mishonga. Izvi nekuda kwekuti vanozviona semamwe akachengeteka uye anoshanda zvakanyanya mishonga inodiwa muhutano hutano. Inowanikwa pamusoro pekupikisa uye senge mishonga yakajairika.
5. Dosage yePyridoxal Hydrochloride yevakavaka ma bodybuilders
Pakati peB-mavitamini, Pyridoxal Hydrochloride inonyanya kukosha kune hutano hwepanyama uye hwepfungwa hutano hwevanovaka ma bodybuilders. Inobatsira mukukura kwemasero matsva, ichitsanangura Pyridoxine hydrochloride kuvaka muviri kugona. B6 zvakare inobatsira mukuyera potassium uye sodium, uye mukugadzira nucleic acids, DNA uye RNA iyo inoitawo chikamu.
Vakadzi vanogona kuishandisa kuenzanisa mahomoni uye kubatsira mukudzivirirwa panguva yekuzvitakura. Inobatawo premenstrual fluid fluid uye ichideredza kurwadziwa kwemwedzi uye acne.
Kushaikwa kwePyridoxal Hydrochloride kunotungamira kune kushushikana, kusagadzikana, kushaya hope, kushaya simba, rimi rakapiswa, zvipikiri zvakabvaruka, arthritis, uye osteoporosis.
Iyo FDA inokurudzirwa dosage ndeye 2mg, asi pamwe nezvinowedzera, yakajairika dose ndiyo 20mg. Pyridoxal Hydrochloride inogona kuva nehupfu paunotora kupfuura 2000mg.
Nekudaro, maererano nekumwe kutsvagisa, yazvino Pyridoxal Hydrochloride dosage yakakurudzirwa kune vanhu vanoshanda neHurumende yeUS haina kukwana.
Izvi zvinoreva kuti avo vanodzora mapoka ezvekudya kana kudzora makorori vanogona kunge vari kumhanyisa njodzi yekushomeka. Naizvozvo, ivo vanogona kusabatsirwa kubva pyridoxine hydrochloride madhara kana vakangotora dofo sekurudziro nehurumende.
Kubva pamigumisiro yekutsvagurudza uku, zvingave zvine hungwaru kubvunza nyanzvi yako yehutano kuti ubatsire kuona yakanyanya / yakaringana pyridoxine hydrochloride bodybuilding dosage kwauri.
6. Pyridoxal Hydrochloride's Medical inoshandisa
Iko hakuna kushomeka kwakakomba kwevhitamini B6 muUS, asi inonyanya kuitika kune vakwegura nevana. Kana iwe uri kurwara nemamiriro ezvinhu akadai se hyperthyroidism, celiac chirwere, autoimmune chirwere, itsvo, kana iwe uri doro unotsamira ipapo uri panjodzi yepamusoro yekutambura neBitamin B6 kushomeka.
Muviri haugone kuburitsa vhitamini B6, saka unofanirwa kuiwana kubva kuma supplements kana chikafu. Izvo zvinodikanwa kudya zvakakwana zvakakwana zvevhitamini kurapa nekudzivirira chirwere chisingaperi uye kune hutano hwakakwana.
Heano mapfumbamwe esainzi-yakarapwa kurapwa pyridoxine hydrochloride inoshandisa:
(1) Anoderedza Zviratidzo zvekushungurudzika uye anovandudza Mood
B-6 pyridoxine hydrochloride inobata basa rinokosha mukugadzirisa mhemo. Izvi zvinodaro nekuti zvinogadzira ma neurotransmitters ayo anotonga manzwiro. Pyridoxine hydrochloride yemimba yakakosha kune vakadzi vane moyo kana vane chinjo dzinokonzeresa nekuda kwekusagadzikana kwehomoni panguva yekuzvitakura.
B6 zvakare inoderedza huwandu hweropa reanocysteine, amino acid inotarisana nematambudziko epfungwa akadai sekushungurudzika. Zvidzidzo zvakawanda zvakabatanidza zvinoshungurudza zviratidzo neakadzika pyridoxine hydrochloride muropa.
(2) Anoderedza Njodzi Alzheimer's uye Anosimudzira Utano hweBongo
Vitamin B6 inozivikanwa nebasa rayo mukuvandudzwa kwehuropi basa nekudzivirira kwechirwere cheAlzheimer. Iyo inoderedza huwandu hweanocysteine ​​muropa nokudaro ichideredza njodzi yekukanganisika kwendangariro uye Alzheimer's.
Kumwe kuongorora kunosanganisira vakuru ve156 vane hunyoro hwekuziva kusapindirana uye kwakakura ropa hemocysteine ​​yakakwira yakawana kuti yakakwirira pyridoxine hydrochloride dosage inoderedza huwandu hweocococosloine muropa uye zvakare inoderedza kudzikiswa kweimwe mitezo yehuropi iri mungozi yeAlzheimer's.
(3) Inodzivirira uye Inobata Anemia
Vitamin B6 inodzivirira uye inobata anemia iyo inokonzerwa nekushomeka kwayo. Izvi zvinodaro nekuti inobata basa mukugadzira hemoglobin. Hemoglobin inopa oksijeni kumasero emuviri. Nenzvimbo yakaderera yehemoglobin, masero ako haazowani okisijeni yakakwana uye semhedzisiro yeichi, iwe unozova neemia uye unonzwa kuneta kana kushaya simba.
Akaderera mazinga evhitamini B6 akave akabatanidzwa neanemia, kunyanya mune vakadzi vane zera rekubereka vana kana avo vane pamuviri.
(4) Inobata Zviratidzo zvePremenstrual Syndrome (PMS)
Imwe ye pyridoxine hydrochloride mabhenefiti ndeyekuti inogona kushandiswa kubata zviratidzo zvePMS zvinosanganisira kusagadzikana, kushungurudzika uye kunetseka. Vatsvagiri vanofunga kuti vhitamini B6 inogona kubata zviratidzo izvi nekuti zvinogadzira mitsipa inobatsira mukumuka kwememo.
Mune imwe kudzidza kudiki, zvakaonekwa kuti zviratidzo zvePMS zvinosanganisira kushushikana, kusagadzikana, uye kushanduka kwemhepo kunogona kuderedzwa zvakanyanya nekutora 200mg yeagesi pamwe chete ne50mg yevhitamini B6 pazuva.
(5) Anobata Nausea Panguva Inoita Mimba
Kwemakumi emakore akawanda, vhitamini B6 yakashandiswa pakurapa kusvotwa uye kurutsa muvakadzi vane pamuviri. Icho zvakare chinongedzo cheDiclegis, mushonga unoshandiswa mukurapa chirwere chemangwanani. Izvi ndezvimwe zvepamusoro pyridoxine hydrochloride kubatsirwa kwevakadzi vanotambura nemamiriro aya panguva yavo yekuzvitakura.
Iyo chaiyo pyridoxine hydrochloride dhiidzo mumimba inosiyana kubva kumunhu kuenda kumunhu. Chidzidzo chinosanganisira vakadzi vane 342 vane pamuviri vakawana kuti zuva nezuva 30mg yevhitamini zvinonzwika yakadzora kunzwa kwavo kwekushungurudzika mazuva mashanu chete mushure mekutanga kurapwa.
Mune kumwe kuongorora kunosanganisira vakadzi vane 126 vane pamuviri, episode yekushungurudzika uye kurutsa zvakaderedzwa zvakanyanya nekutora 75mg yevhitamini B6 zuva nezuva. Zviratidzo zvakaderedzwa ne41% mushure memazuva mana zvinoratidza kushanda kwe pyridoxine hydrochloride yemimba.
(6) Kunoderedza Njodzi Yechirwere chemoyo nekudzivirira maClogged Artery
Pyridoxine hydrochloride ine basa rakakura mukudzivirira kuvharika kwemitsipa ndosaka ichideredza njodzi yechirwere chemoyo. Kana iwe uine yakaderera mazinga evhitamini B6, njodzi yako yekuwana chirwere chemwoyo inoda kuita zvakapetwa kana zvichienzaniswa nevaya vane akajairika evitamini muropa. Vitamin B6 inoderedza mikana yemidziyo yekuvhara nekudzora huwandu hwehomeocysteine ​​muropa.
Mune kumwe kuongorora kwaisanganisira makonzo aive asina kukwana muvhitamini B6, zvakaonekwa kuti ivo vaive nehuwandu hwe cholesterol uye zvakare vakagadzira maronda. Izvi zvinogona kukonzera arterial blockages kuitira kuti vazivikanwe kune Homocysteine. Kumwe kutsvakisisa kunosanganisira vanhu kwakaratidzawo kuti Vitamin B6 inogona kudzivirira chirwere chemwoyo.
(7) Inobatsira mukudzivirira Kenza
Izvi zvimwe zvinonyanya kukosha pyridoxine hydrochloride inoshandisa yakapihwa kuwanda kwegomarara nhasi. Kana iwe uri kuwana yakakwana Pyridoxine hydrochloride, njodzi yako yekukudziridza mamwe marudzi ekenza ichaderedzwa. Chikonzero cheizvi hazvinyatsojekeswa asi vanoongorora vanofunga kuti zvinoenderana nekugona kweB6 kurwisa kuzvimba kunokonzeresa mamiriro ezvinhu akadai sekenza.
Mushure mekuongorora zvidzidzo zve12, vamwe vaongorori vakagumisa kuti yakakwana yeropa yeB6 inosanganiswa nenjodzi yakaderera yekukonzera kenza ye colorectal. Kana iwe uine yakakwirira yeB6, mikana yako yekurwara necorectal cancer ichaderedzwa ne50% kana ichienzaniswa nevaya vane yakaderera B6.
Mune kumwe kutsvakwa kwakaitwa kuti kudyidzana hukama pakati pyridoxine hydrochloride mazamu uye kenza yemazamu, zvakaonekwa kuti yakakwana nhanho yeB6 muropa inoderedza njodzi yekenza yemazamu, kunyanya mune vakadzi postmenopausal.
(8) Inodzivirira Kurwara Kwemaziso uye Inosimudzira Utano hweMaziso
Vitamin B6 inobatsira kudzivirira zvirwere zvemaziso, kunyanya zviya zvine chekuita nekukwegura - zera-rine hukama nemacular degeneration (AMD). Paunenge uine huwandu hwakanyanya hwehomeocysteine ​​inoyerera muropa rako, iwe unenge uine mikana yepamusoro yekukudziridza AMD. Pyridoxine hydrochloride inobatsira mukuderedza yakakwirira yehomweocysteine ​​muropa nokudaro ichideredza njodzi ye AMD.
Maererano nekumwe kuongorora kwakaitwa pane vanopfuura vakadzi ve5,000, zvakaonekwa kuti zuva nezuva vhitamini B6 yakasanganiswa nevhitamini B12 uye folic acid inoderedza njodzi ye AMD kusvika pa40%, zvichienzaniswa nevaya vasingatore mavhitamini.
Kumwe kutsvakiridza kwakabatanidza matambudziko eziso kusvika kune rakaderera muropa; kunyanya matambudziko emaziso anotungamira kuvharika kwemapfini akabatana neiyo retina. Nzvimbo yakaderera yepyridoxine hydrochloride zvakare yakave yakabatana nekusawirirana kweiyo retina.
(9) Kubata Rheumatoid Arthritis Kuzvidzivirira
Kana iwe uri kurwadziwa neRheumatoid Arthritis Kuzvimba, kutora B6 kunogona kubatsira kudzora marwadzo ako. Arthritis pachayo inodzikisa huwandu hweB6 mumuviri uye iri zinga rinoda kururamisa.
Chidzidzo chakaitwa pane vakuru ve43 vakazoona kuti zuva nezuva dhigirii yemusanganiswa we5mg ye folic acid uye 100mg yeB6 yakadzikisa zvakanyanya huwandu hwemamolekitoriya ekuitisa mumiviri yavo mushure memavhiki e12.
7. Mhedzisiro yemukati mePyridoxal Hydrochloride
Pyridoxine hydrochloride yakachengeteka kushandiswa nevanhu vanovaka muviri. Izvo zvakachengetedzawo kushandiswa kwekurapa. Nekudaro, ine mhedzisiro dzakasiyana muvanhu vakasiyana Mamwe pyridoxine hydrochloride madhara anosanganisira:
Zviratidzo zvekusanzwisiswa kuita senge zvakaoma mukufema, mikoko, kuzvimba kwemiromo yako, kumeso, pahuro kana rurimi
Yakaderedzwa manzwiro kune vibration, tembiricha, uye kubata
Kunzwa kuneta kana kushomoka mumaoko ako
Kurasikirwa kwekubatana kana kuyera
Kupera simba kana kuhukura, kudzvanya kana kupisa shungu mumakumbo nemaoko
Kuverengeka kwakakomberedza muromo wako kana tsoka dzako
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchiona zvakanyanya pyridoxine hydrochloride side madhara ipapo zvingave zviri nani kwauri kuti utsvage kurapwa.
8. Ndeipi nyevero uye maitiro ekudzivirira kwePyridoxal Hydrochloride?
Yakanyanya doses yePyridoxal Hydrochloride inogona kukonzera mitsipa kusagadzikana. Izvi zvinokanganisa zvinogona, zvichizotungamira kumatambudziko ekugadzikana uye kurasikirwa kwekunzwa mumakumbo. Kune mamwe mimwe mishumo iyo yakakwirira doses ye pyridoxine hydrochloride inogona kutungamira kuganda. Nerombo, kana iwe ukamira yakakura dosi, iwe uchapora zvakakwana.
Zvinokurudzirwa kuti usatore yakakura dosi yemushonga panguva yekuzvitakura. Chiremba chete anokwanisa anofanirwa kusarudza iyo Pyridoxine hydrochloride dose mune pamuviri. Ziva zvakare kuti kunyangwe iwe uri muvaki wemuviri kana kwete, iwe haufanire kutora kupfuura 100mg ye pyridoxine hydrochloride pazuva pazuva kunze kwekunge iwe wataura kune wako mupi wekuchengetedza hutano.
Paunenge uri pane mushonga wePyridoxal Hydrochloride, iwe haufanirwe kumira, tanga kuishandisa pamwe chete nemumwe mushonga, kana kushandura dosage pasina mvumo yemupi wako wekuchengetedza hutano.
Kunyangwe hazvo Pyridoxal Hydrochloride isina kuzivikanwa kwakakomba kana kwakasimba kudyidzana nemamwe madhiraizi, nguva dzose zvakanaka kuva unongwarira.
Cordarone (Amiodarone) inowedzera manzwiro ekupenya kwezuva painosangana neB6. Kusanganiswa uku kunogona kuwedzera mikana yako yekutambura nemarara, kutumbuka, kana kupisa zuva panzvimbo dzakaratidzwa ganda rako. Ive neshuwa kupfeka zvipfeko zvinodzivirira kana sunblock paunenge uchitora musanganiswa uyu.
Muviri wako unoputsa Luminal (Phenobarbital) kuti uibvise. Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) inowedzera mwero iyo Luminal inopunzika pasi nokudaro ichideredza kushanda kwayo mumuviri wako.
Kungofanana neLuminal, Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) kuputsa kemikari iyi kuti ubvise mumuviri wako. Kutora musanganiswa weDilantin uye Pyridoxal Hydrochloride kunoderedza kushanda kweiyo yekare mumuviri wako. Izvi zvinogona kuwedzera mikana yako yekuwana kubatwa.
Mamwe madhiragi anobatana nePyridoxal Hydrochloride anosanganisira:
Pyridoxal Hydrochloride ine hunyoro kudyidzana neanopfuura 70 akasiyana madhiragi. Saka, usati washandisa chero mushonga unosanganisirana nayo, simbisa kuti unobata wako mupi wehutano.
B6 inoshanda zvakanaka nemamwe maB-vitamini MCT's, CLA, zinc, sodium, potasiamu, magnesium, uye vitamini C.
Zvakanakira Pyridoxal Hydrochloride kune bodybuilders akawanda. Kwete chete vavaki vemuviri, mutambi wese akakomba anofanira kuva nevhitamini iyi mumatanda. Nekudaro, iwe unofanirwa kuishandisa zvakanyanya kuomerera kune madosi akakurudzirwa nevarapi vekurapa.
Mabasa anorema ane chekuita nekuvaka muviri anotungamira kupfeka kubva pamasero emuviri uye mhasuru. Zvakanaka kutsiva izvi uchishandisa vitamini B6 supplements. Kana uchitenga a Pyridoxal Hydrochloride chigadzirwa, simbisa kuti unozviita kubva mukurumbira zviwanikwa se Aasraw. Kuti uite zviri pamutemo Pyridoxine hydrochloride kutenga, ingoshanyira aasraw.com nhasi uye ita odha.
1 Osswald, H, et al, 1987 Simba reSodium ascorbate, menadione sodium bisulfite kana pyridoxal hydrochloride pane chepfu uye antineoplastic chiito cheN-methylformamide muP 388 leukemia kana M 5076 sarcoma mu mice Toxicology 43 -NUMXNNX PMID: 2
2 Reimer, LG, et al, 1983 Mhedzisiro ye pyridoxal pakukura kwehutano hwakasiyana-siyana turptococci uye mamwe mabhakitiriya pane eropa ramazamu agar Diagnostic microbiology uye chirwere chinotapukira 1 (4): 273-5 PMID: 6667606
3 Zygmunt, WA, et al, 1962 RUDZIKI RWE D-CYCLOSERINE INHIBITI YEMABHUKU DZAKUKURU NA ALANINE Nhoroondo ye bacteriology 84 (1): 154-6 PMID: 16561951
2019 Nzira yekuita testosterone enanthate homebrew mu 6 nhanho
Flibanserin Inobatsira Sei Mukadzi sePabonde Hormone	Synephrine HCL Powder - Mafuta anopisa uye uremu Wekuwedzera huremu